आँखाको हिज्जे परीक्षक छ Martech Zone
आँखाको हिज्जे परीक्षक छ
मंगलवार, नोभेम्बर 11, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो हप्ता मैले भर्खर पढ्न सकें मातृ जिब्रोलाई सहि गर्दै: पुरानो अ From्ग्रेजीबाट इ-मेलमा, अंग्रेजी हिज्जेको टेन्ल्ड स्टोरी by डेभिड वोल्म्यान.
तपाईंलाई थाहा छैन कि ओर्थोग्राफी र व्युत्पत्ति के हो र त्यो ठीक हो। मलाई थाहा छ म व्याकरण र हिसाबको एक कसाई हुँ, तर यो पुस्तकले मलाई मेरो सीपको बारेमा थोरै राम्रो महसुस गरायो। अंग्रेजी भाषामा लाखौं शब्दहरू छन्, तर औसत हाई स्कूलको स्नातक 60,000०,००० को बारे मा थाहा छ। तथ्य यो छ कि हामी मध्ये धेरै जसो शब्दहरू बहुमतले आफ्नै भाषामा के हुन्छ भन्ने कुराको संकेत गर्दैन!
हाम्रो भाषा भनेको फोनेटिक रूपमा गलत छ र सिक्नको लागि असम्भव भाषा हो। केही व्यक्तिहरू गलत हिज्जे सम्बन्धी अज्ञानताको संकेत हो भन्ने विश्वास गर्दछन्, तर शेक्सपियर आफैंले दुबै आविष्कार र हिज्जे शब्दहरू प्रयोग गरे जसलाई उनी उचित देखिन्थ्यो। उसले महसुस गर्‍यो कि पत्र र शब्दहरू मूर्तिकारको लागि माटो जत्तिकै थिए। कल्पना गर्नुहोस् यदि मैले यो ब्लगमा आफ्नै अप्राकृतिक शब्दहरू बनाएँ भने, मान्छेहरूले मलाई बेच्ने छन् (छोडेर जानु भन्दा पहिले)।
जब हामी नयाँ सहस्राब्दीमा जान्छौं, हामी आफैंलाई प्रविधिको सन्दर्भमा शब्दहरू बोल्छौं जुन आफैंले कुनै औपचारिक शब्दकोशमा पाउनेछैन… र शब्दकोश प्रकाशकहरूले पनि यसलाई के बनाउँछ र के गर्दैन भन्ने कुरामा सहमत हुन सक्दैनन्।
यदि हामी विश्वास गर्दैनौं कि हामी नयाँ शब्दहरू आविष्कार गर्दैछौं हामी हिँड्दै जाँदा तपाईंले केवल समयमै एकपटक हेरिनु पर्छ OK…। वा त्यो हो ठीक… वा त्यो हो ol Kor करेक्ट or ओले कुर्रेक। सोच्नुहोस्, तपाईको नातिनातिनाहरु सँग उनीहरुको दैनिक कुराकानीको एक हिस्सा हुन सक्छ, rofl, lmao, asap, lol, ttfn।
यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न? कसरी भन्ने शब्दको बारेमा स्कूबा, जुन आत्म-अन्तर्निहित पानीको ब्रीथिंग उपकरणको लागि एक परिवर्णी शब्द थियो। कसरी बारेमा ब्लग, जुन एक दशक भन्दा कम पहिले थियो वेब लग! शब्दको साथ ब्लगर, ब्लगि blog, ब्लगिging र ब्लगवेयर आयो। यो एक पर्याप्त रमाईलो समयको रूपमा छ किनकि आज धेरै अनलाइन शब्दावलीहरू, एक्रोनिमहरू वा छोटो कोडहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
साथै, यो चाखलाग्दो छ कि विज्ञापन र मार्केटिंगलाई ओर्थोग्राफीका नियमहरू पछ्याउँदैनन्। हामीसँग गुगल जस्ता कम्पनीहरू छन, आईफोन जस्ता चीजहरू र Seesmic जस्ता उत्पादनहरू जुन पूर्ण रूपमा स्वीकार्य छ - तर हामीसँग आफ्नै सामग्रीमा आकस्मिक गलत हिज्जेको लागि धेरै थोरै सहिष्णुता छ। मलाई लाग्छ यो रमाईलो छ
धन्यवाद हामी अझै पनि हिज्जे जाँचमा भरोसा गर्न सक्छौं!
आँखाको हिज्जे परीक्षक छ,
यो मेरो मटर सागरको साथ आयो।
यो प्लेन लीले मेरो चारवटा स्थान चिन्हित गर्दछ
मिस स्टीक्स मैले समुद्री गाँठ्न सक्छु।
आँखाले हावामा प्रहार गर्दछ र एक शब्द टाइप गर्नुहोस्
र तौल यो चार भन्छन्
मौसम आँखा म गलत लेख्न छु
यसले मलाई सिधा तौल बताउँछ।
म तपाईंलाई पुस्तकको प्रतिलिपि लिन प्रोत्साहित गर्दछु, यो इतिहासको माध्यमबाट हिड्न मजाको छ। डेभिड पढाइ धेरै हल्का राख्छन्। अझ मनोरन्जनात्मक कुरा के हो कि उनले अंग्रेजीको सबै उत्पत्ति कथन गरेका छन् किनकि उहाँ आफैंले स्थान परिवर्तन गर्नुभयो जहाँ उनीहरू परिवर्तन भएका थिए। यो एउटा राम्रो पढ्न!
टैग: कुल तथ्या .्कऔसतब्रान्ड अडिटिंगग्राहक प्रोफाइलडाटाबेस खननकीवर्ड भोल्यूमखानीमोबाइल र ट्याब्लेट मार्केटिंगअनलाइन शपिंग व्यक्तित्वमान्छे
सबैले केही दिए, सबैले सबै दिए। धन्यबाद।
प्रति पोष्ट कति शब्दहरू सहि छन्?
बिल ब्रायसनको समान नाम र पहिलेको पुस्तक अर्को उत्कृष्ट पुस्तक हो, यदि तपाइँ ब्रायसनको अथक रूपमा-फेक्ने-तथ्य-तथ्य-तपाई" लेखन शैलीलाई मन नपराउनुहुन्छ। मैले Wolman को पुस्तक पढेको छैन, त्यसैले मलाई थाहा छैन त्यहाँ कति ओभरल्याप हुन सक्छ।
डैन, मैले त्यो जाँच गर्नु पर्ने हुन सक्छ। गत वर्ष मेरो मनपर्ने पुस्तकहरू मध्ये एक थियो बिल ब्रायसनको लगभग सबै कुराको छोटो इतिहास!
हो, छोटो इतिहास ठीक त्यस्तै थियो किन मैले मातृभाषा लिइन जब म यसमा चल्दै थिए।